Tag: miverina amin'ny fandaniana doka | Martech Zone
Tag: miverina amin'ny fandaniana doka
Ahoana ny fomba hampitomboana ny dokambarotra PPC ROAS ao anatin'ny 5 minitra miaraka amin'ny Google Analytics
Alakamisy, Septambra 17, 2015 Alakamisy 5, 2015 Chris Bross
Efa nampiasa ny angona Google Analytics ve ianao hanatsarana ny valin'ny fampielezan-kevitr'i AdWords? Raha tsy izany dia tsy ampy amin'ny iray amin'ireo fitaovana manampy indrindra amin'ny Internet ianao! Raha ny marina, am-polony ny tatitra azo ampiasaina amin'ny fitrandrahana angon-drakitra, ary azonao ampiasaina ireo tatitra ireo hanatsarana ny fampielezan-kevitra PPC manerana ny solaitrabe. Ny fampiasana Google Analytics hanatsarana ny fandaniana amin'ny fandaniam-bola (ROAS) dia azo heverina avokoa, mazava ho azy, manana ny AdWords anao ianao,
Radius Impact: mpiara-miasa, Affiliate, Media ary fitantanana tag
Alatsinainy, Jolay 21, 2014 Douglas Karr
Impact Radius dia ahafahan'ny marika sy sampan-draharaha nomerika hampitombo ny fiverenan'ny doka amin'ny fantsona nomerika, finday ary ivelan'ny Internet. Ny haitao ara-barotra SaaS azon'izy ireo dia ahafahan'ny mpivarotra manana fomba fijery an-tsokosoko amin'ny ezaka marketing rehetra amin'ny alàlan'ny fanangonana angon-drakitry ny dia sy ny vidin'ny marketing. Ny Impact Radius Suite of Products dia misy ny Partner Manager - mandeha ho azy ny programa mpiara-miasa na mpiara-miasa stratejika aminao. Ahenao ny saram-pandraharahana ataonao ary ampitomboy ny ROI eo am-panatsarana ny fahaizany mandanjalanja, ny fahitana an-tsaina, ary